Xukuumadda Somaliland oo Kafaalo qaaday Tacliinta Gabadh Muuqaal Laga Duubay | Aftahan News
Xukuumadda Somaliland oo Kafaalo qaaday Tacliinta Gabadh Muuqaal Laga Duubay
Hargeysa (Aftahannews)- Wasaarada waxbarashada ee Somaliland ayaa maanta deeq waxbarasho siisay, Ayaan Yuusuf Maxamed oo ah gabadh da’a yar oo gabadh ay qaraabo ahayeen oo ay ushaqaynaysay ka duubtay muuqaal iyada oo u hanjabaysa isla markaana ay muuqaalkii baraha bulshada ku baahisay, taasi oo sababtay in ay dadwaynuhu ka cadhoodaan.
Wasiirka wasaarada Waxbarashada Somaliland Maxamuud Diiriye Toorno iyo sarakiil sar sare oo katirsan wasaarada ayaa, maanta xafiiska wasaarada ee Hargeysa ku qaabilay Ayaan Yusuf Maxamed oo muuqaal ay ka duubtay gabadh ay shaqaale u ahayd uu baraha bulshada qabsaday, hadaba wasaarada waxbarashada ayaa maanta u balan qaaday Ayaan in dawladu bixinayso dhamaan qarashaad keeda waxbarasho.
Ayaan Maxamed Yuusuf
Xukuumadda oo Kafaalo qaaday Waxbarshada Gabadhyar oo Muuqaal laga Duubay
Wakhtigu waa horaantii bishii Jenawry ee sanadkan 2021 ka, Ayaan waxa ay ka shaqaynaysay guriga Samsam Kaahin oo ay qaraabo ahaayeen, kadibna Samsam ayaa jikada (madbakha) ugu soo galaysa Ayaan oo weel maydhaysa (dhaqaysa), kadibna intay kamarada telefoon keeda furto ayay ku odhanaysaa “naa yaa ku soo diray?. Yaa ku yidhi soo sumee? Maxad cuntada sunta iigu dartay?. Iyado waliba u hanjabaysa Ayaan yar na waxay markastaba ku cel celinaysay in aanay wax dambi ah gali, iskuna dayin in ay sumayso.